N'agbanyeghị ole ole ihe ndị na-efu ọnwụ emela ihe, Orlistat ga-abụrụ gị ụtụtụ ọhụrụ. Ọ bụrụ na ị nọ na-eche ihe ị ga-eme, ị ga-achọ ịmatakwu banyere ya ugbu a .Ọrlistat bụ onye na-ahụ maka counter ọgwụ ọjọọ kachasị mma nke na-enyere ndị mmadụ aka ibute ngwa ngwa. Chọrọ ụfọdụ ihe àmà? Nchọpụta ọmụmụ egosiwo na mgbe ị na-eji Orlistat, ahụ gị ga-atụfu ibu karịa mgbe ị na-anwụ nanị. Ọ bụrụ na ị ka na-enwe obi abụọ ma ị ga-ewere Orlistat, m ga-agwa gị gbasara Uru Amountat, nsonaazụ Orlistat na ebe ịzụta Orlistat na ị ga-achọ ka ị mara banyere ya na mbụ. Ozugbo ị marala banyere ọgwụgwọ ọrụ ebube a, ị ga-aghọta na ọ bụ ọgwụ na-edozi ahụ na njem njem ọnwụ gị.
Anyị na Phcoker.com, ụlọ ọrụ China nke na-arụ ọrụ maka nkesa, ịmepụta, na ịzụ ahịa nke ndị na-ahụ maka ọgwụ na-arụ ọrụ na ngwaahịa gụnyere Orlistat.
N'ụlọ ọrụ anyị, anyị na-akwụ ndị kasị mma, ndị anwale ma nwalee ndị si n'ọhịa dị iche iche. Ihe ịga nke ọma na ụlọ ọrụ anyị na-eweta site na ahụmahụ ha, ọkachamara magburu onwe ya, na arụmọrụ pụtara ìhè. Dị ka ụlọ ọrụ, anyị na-agbasi mbọ ike ịzụlite mmepe ha site na ọzụzụ, nkụzi na ịzụ ihe mgbe niile. Anyị na-enye ha ngwaọrụ zuru oke maka nkwurịta okwu ka ha nwee ike ịzaghachi ma mee ka ha nwekwuo mmụọ.
Mgbe ụfọdụ, ị nwere ike chọpụta na ị na-achọ iri nri ma ọ bụ mkpụrụ osisi naanị. Enweghị nchegbu ị na-eri nri a na-enweghị nri; ihe niile ị ga - eme bụ ịhapụ nsụgharị Orlistat mgbe nri ahụ gasịrị.
N'ịbụ onye na-atụfu ọnwụ, ọ ga-arụ ọrụ maka gị ma ọ bụrụ na ị na-eleba anya na ị gafelata. Ọnwụ na mmega ahụ pụrụ iyi ihe na-abaghị uru, ma usoro nlekọta ọrụ nchịkwa nke gụnyere iji Orlistat mee ihe bụ ezigbo ihe. Ọ bụrụ na ị jiri Orlistat, ọ pụtaghị na ị ga-anọdụ ala ma chere maka ihe ga-esi na ya pụta. Ịgbaso ụzọ ndụ siri ike nke na-agụnye iri ahụike na inwe mmega ahụ mgbe nile ga-enyere gị aka ibu dị arọ fọrọ nke nta.
Ọ dị mma ka ị wereOrlistat? Ọ bụ ọgwụ kachasị mma maka ịṅụ ọgwụ ọjọọ ma olee otu ị si mara na oge eruola ka ị ghara ibu ibu. Ozugbo ị ghọtara otu esi elele ma ị bụ oke, ị nwere ike ịma mgbe ị ga-eme ihe na-efu. Ọ bụ ezie na ụzọ zuru oke ị ga-esi agwa ma ọ bụrụ na ibu ibu bụ site na ịhụ dọkịta ahụ, ihe ngosi ole na ole nwere ike inyere gị aka ịkọ ma ọ bụrụ na ị gafee akara. Ihe mbu nke nwere ike inye gị oku edemede bụ BMI dị elu. Nọmba BMI egosiri na-egosi na ahụ gị dị arọ ma ọ bụ elu. Na ọnyà, ịnwere ike ịlele ogo gị na ibu iji chọpụta ma nkpọka ahụ gị (BMI) dị mma. Ọ bụrụ na BMI gị bụ 18.5-24.9, a na-ewere ya na ọ bụ ihe nkịtị ka nke 25-29.9 na-egosi na ibu oke.
Ịnweta BMI nke karịrị 25 na eriri nke dị n'elu 40 sentimita maka nwoke ma ọ bụ 35 sentimita maka nwanyi ekwesịghị ime ka ị dị ala. Ozi ọma ahụ bụ na mgbe ị na-eji ntinye aha, nyochaa nri gị ma malite ịme ihe ị ga-atụba pound ndị ọzọ n'oge na-adịghị anya karịa ka ị na-eche. Na ngwa ngwa ị ga-ebido, mma ọ ga-abụ maka gị. Orlistat utịpụtara amalite ịbanye na ngwa ngwa ịmalitere ọgwụ.
Ọ ga-eme ka ị dịkwuo ike ma na-agagharị. Ozugbo ị kwụsịrị ibu, ị na-ebu ibu dị arọ n'ihi na enweghi obere ihe na nkwonkwo na akwara. Ị ga-akawanye ike ime ihe gị na azụ, ụkwụ, ikpere ụkwụ na ụkwụ ga-abụ ihe n'oge gara aga. Kedu ihe ọzọ bụ na ihe ọ bụla n'ime anụ ọhịa furu efu n'ime afọ gị na-ebelata ihe nkedo na azụ gị site na otu narị pound. Ịgba ụda agaghị abụ ọrụ ọzọ; ị nwere ike ime ya n'egbughị oge.
Ụdị omume Kedu otu ọrụ Orlistat si arụ? Orlistat na-arụ ọrụ site na igbochi uru anụba n'ime ahụ. N'ihi ya, ahụ na-eji abụba echekwara na-eme ka ọ ghara ịdị arọ. Lorcaserin na-arụ ọrụ site n'ime ka mmadụ nwee mmetụta zuru ezu ma si otú ahụ belata ego nri. Ọ na-eme nke a site n'ịkpali ndị ntinye aka nke Serotonin 2C. Sibutramine na-arụ ọrụ site na-agbanwe ụzọ ndị na-ahụ maka ntanetị n'ime ụbụrụ na-arụ ọrụ. Ọ na-egbochi mmighachi ha site na nke a iji gbanwee ụzọ anụ ahụ na-ebu arọ.
Nne ọ bụla dị ime ma ọ bụ nke na-enye nwa ara agaghị ewere Orlistat. Ihe mere nke a bụ n'ihi na a ga-enyefe ya nwa e bu n'afọ ma ọ bụ nwa aṅụ. Jide n'aka na ị ga-enwale ule ime nwa tupu i kpebie iji Orlistat. Ọ bụrụ na ị dị ime mgbe ị na-aṅụ ọgwụ a, gwa onye na-ahụ maka ahụ ike gị. Jiri nlezianya kpachara anya mgbe ị na-ewere ọgwụ mgbochi dị ka ọgwụ a nwere ike ime ka ha ghara irè.
Orlistat bụ ihe ngwọta kasịnụ nye oke nhụjuanya gị. Nsonaazụ Orlistat enyerela gị aka ịhapụ ihe karịrị otu lb n'izu; nke a bụ ọnwụ ọnwụ. Ozokwa, ọ na-enyere gị aka ịnọgide na-ebu ibu ka ị ghara ịdị mma taa ma biekwa ibu gị mgbe ụbọchị ole na ole gasịrị. Lelee nri gị ma rie nri. Ekwesighi iwere ya na ibe chocolate n'otu oge. Ị nwere ike ịchekwa ụfọdụ maka ụbọchị ọzọ. Omume ga-enyere aka mee ka usoro ahụ dị mfe, ụzọ kachasị mfe i nwere ike isi mee ya bụ na mgbatị ahụ. Inwe onye na-enye onwe gị ọzụzụ ga-enyere gị aka ịchekwa mkpịsị ụkwụ gị. Ọ ga-enyekwa gị ndụmọdụ kachasị mma maka ụdị ahụ gị. O nwere ike ịbụ biking, igwe ma ọ bụ cardio. Ọ bụrụ na ị bụghị onye mgbatị ahụ, ịnyagharị ma ọ bụ na-agba ọsọ nwekwara ike ịrụ ọrụ maka gị.
Orlistat bụ ọgwụ FDA kwadoro nke ọma nke a maara maka irè ya. Akwụkwọ Orlistat na-ekwu okwu gbasara ya na ihe ka ọtụtụ n'ime ndị mmadụ na-eji ya karịa 5% nke mkpokọta ha niile n'ime otu afọ. Uru ya abiala na-agafe karịa pound ebe ọ bụ na ọ na-ebelata ihe ize ndụ nke ịnweta ọnọdụ egwu ndụ dika ọbara mgbali na ọkwa cholesterol dị elu.
Ị nwere ike ịnọ na-eche ebe ị ga-azụta Orlistat iji nweta anwansi ahụ na arọ gị. Na Phcoker.com, anyị na-ere Orlistat nke adịghị ọcha. Na Orlistat ego bara uru, anyị ga-ekwukwa na ị ga-abara uru ọ bụla ị na-eji. Idebe iwu na anyi anaghị ewe oge gị, ihe niile ị ga - eme bụ jupụta nkọwa gị, ajụjụ ọnụ ma chere maka nkwado nke iwu gị. Ozugbo i mere ugwo, anyị ga-eziga ọgwụ ahụ, ma ị nwere ike ijide n'aka na ọ gaghị adị ogologo iji nweta ọnọdụ gị.
Ịhapụ ngwa ngwa ngwa ngwa adịghị mkpa mgbagwoju anya. Ịzụta Orlistat taa, kpochapụ mkpụrụ ọgwụ na nkasi obi nke ụlọ gị ma hụ ka ibu gị belata.
Nnọọ, ị natara onyinye m? site na2325214cv